Ukuthenga izixhobo zokuhlamba kufuneka ukhethe ukuthobela
Utyalo yempahla yokuhlamba kufuneka athenge zonke iintlobo zokuhlamba impahla ngokuqinisekileyo, abaninzi abantu abaninzi baxhala xa behlamba impahla. I-Awazi kufuneka ukhethe uhlobo oluthile lokuhlamba impahla, khetha ixabiso, ubuninzi, yiziphi izinto ozifunayo, kunye neminye imibuzo ephazamisayo bethu abatyala-mali, njengoko kuveliswa ngumenzi we-ENEJEAN namhlanje ukuhlalutya kakuhle;
Ukuthetha ngokuqinisekileyo, izixhobo ezilungele ngokwenene ngokubhekiselele ekusebenzeni, izinga, ukwandisa kunenzuzo, kodwa ngokufanelekileyo ngenxa yoko ke ixabiso layo liphezulu, ngoko kuya kuqinisekiswa ukuba ukukhuliswa kwesimali sethu sanda. I-Ezifana ne-100 kg yezixhobo zokuhlamba kunye nexabiso elihle lokungenisa imveliso kwiminyaka engaphezulu kwe-20, iimveliso zekhaya ziphela ngo-6-100000 i-yuan okanye ngokuqhelekileyo. Ulwahlulo lwamaxabiso lufanelekile ukucingisisa. Okokuzikhethela kuphela, ukuba uhlaziyo olusetyenzisayo lungakwazi ukuhlawula, njengesiqendu sokuhlamba izixhobo kunye nokwenza umyalezo ngokuzenzekelayo ngeendlela ezimbini, kuquka ngokuzenzekelayo ngaphandle kokulayishwa kwezinto ezilungileyo, kodwa oku kuhlobo oluhlambalazayo, ukulungiswa komsebenzi wokucoca, iindawo zokulungisa, ihotele kunye nezinye izitya zokuhlamba iingubo: okanye, ngokuqhubekayo kubasebenzisi abancinci ibhanti aziyi kubaluleka kakhulu.
Kukho rhoqo ukusetyenziswa kwezixhobo ezintsha zokuhlambalaza, oko kukuthi, ngokungakumbi, njenge-ozone i-ozone, ingenziwa ukuhlamba i-ozone, nangona ubunzima bokugcina ixabiso, ukuphucula indlela yokuhlambalaza, kodwa iimfuno zixhotyiswe nge-ozone generation, kunye nezindleko zokwakhiwa kwale nkqubo nganye Ukuhlamba iimpahla ezincinci kunye nendawo eziphakathi ezingakwazi ukuzifumana. Ukubonakala kwalo hlobo lweengxaki kuya kubonakala kuthengwa izixhobo zokusebenza zokuhlamba ngokupheleleyo kodwa akakwazi ukusetyenziswa ngokupheleleyo. Kuba ekubeni ungathengi olulungileyo, yiyiphi efanelekileyo kakhulu kumakhasimende ethu? Okokuqala yintengo efanelekileyo, kufuneka sibe sisilungele phambi kohlahlo lwabiwo-mali, qinisekisa ukuba uthenge malunga nexabiso lokuhlamba impahla, kwaye ukhetha okufutshane kunye neemveliso zokuhlamba.
Elandelwa ngumsebenzi ofanelekileyo, simele senze amandla okuhlamba nsuku zonke: ngaphambi kokuthenga, ukuhlaziya iimfuno zewebhu, njengokuba uthengisa izixhobo zokuhlaziya zonke iintsuku okanye ukufuna ukujongana nayo, kwaye ke ekuveleni ukukhetha umzekelo ofanelekileyo ngokuhambelana neemfuno. Ngaphezu koko, umthengisi ofanelekileyo, ukusetyenziswa ngokufanelekileyo kwezixhobo eziza kuxhomekeka kumbane onamandla, ababoneleli abanokubonelela ngeenkonzo zokuthengisa emva kokuthengisa, kuya kusebenza ngokuthe ngqo kwi-machine ngokuqhelekileyo, okanye ukuxazulula ukufika kwexesha elikhoyo. Ngoko ukhethwa ngumthengisi, kufuneka sikhethe abahlali okanye abahlobo babo, nokuba akukho nto kufuneka ikhethe kwiindawo okanye kwindawo elandelayo yokunxibelelana emva kweenkonzo.
Ngokuqhelekileyo uthengisa imveliso yokuthengisa ayithengi ixabiso elincinci elingenakukwazi ukuzithengela ngokwabo, ngokubanzi, inkampani yethu ebusweni ayifanelekanga xa kuthengwa izixhobo zabathengi, abasebenzi bethu bezentengiso baza kukunika ukulungiselela izixhobo ezifanelekileyo.
Inqaku lokugqibela: Izixhobo zokuhlamba iimpahla z...
Inqaku elilandelayo: Ixabiso lokucoca ixabiso elibi...